Madaxweyne Mahmud Abbas oo qaatay go'aan taariikhiya ee raadinta xornimada Falastiin - iftineducation.com
Jakarta- Madaxweynaha Falastiin Mahmud Abbas ayaa qaatay go’aan taariikhiya oo ku aadan raadinta xornimadooda. Abbas waxoo sitoos ah ugu codsaday Qaramada Midoobay iney aqoonsato falastiin wadan xubin buuxda ka ah Qaramada Midoobay.
asagoon ujexan jexeynin kasoo horjeedka Israel iyo Mareykanka, Abbas waxow gacantiisa ugu dhiibay qoraalka formalka hoghayaha Qaramada midoobay Ban Ki-moon. Dalabka Abbas waxaa taageeray inkabadan 120 dal.
Abbas waxow sitoos ah ugu horsheegay dalabkaas hoghaya guud ee qarama midoobay hortiisa. Inkastoo dadaalada nabadeynta horeeyay marar badan gaashaanka kudufutay israel. Hadana Abbas waxoow gadaal kariixayaa falastiin ineysan ubaahneyn iney midlanoqoto israel.
Israel xita sidhaqsi leh bey ugu soo jawaabtay go’aanka uu qaatay Abbas aad beyna ugu carootay go’aanka falastiin.
Ban Ki-moon waxaa horyaalla inow kasoobaxo codsigaas taariiqiga ah ee uyaala qaramada midoobay. Inkastoo codeynta iney kamid noqoto xubin buuxda Qaramada midoobay ay qaadaneyso waqti isbuucyo. Hadana afhayeenka qaramada midoobay Martin Nesirky waxuu kadhawaajiyay in codsiga falastiiniyiinta ladardargalindoono.
Talaabadaas oo qaaday Abbas waxey hesashay soo dhaweyn wadamo badan lakin kaduwan Mareykanka xubinta ufadhiso qaramada midoobay Susan Rice waxaa kamuuqday waji gabax ah intoow qudbeynaayay Abas xitaa meysan sacbinin.
Twitter keeda waxey ku tiri wadahadal toos ah waxey horseedeysaa iney nabad kusoo dabasho falastiin.
“Gabagabadii khudbada kadib maanta, waa inaan qirnaa in wadada kaliya ee lagu istaajiyo wadan aytahay ayadoo loomaraayo wada xaajood toos ah, ma’ahan wada gaaban. ” waa sideey hadalka udhigtaye.